Hambani-Ngemiyoyo Yatshintsha Iindawo Ngezibulo
Ngeemiphefumlo ezitshintsha indawo
Ukuhamba-emiphefumlweni yimiphefumlo ekhetha ukuzithobela umzimba emzimbeni oqinisiweyo kunokuba usana olusandula kuzalwa. Ukuphelisa imiphefumlo kuthatha ubuntu bokuba sele bukhona. Ukuhamba okuhambayo kwenzeka xa kukho isivumelwano semvumelwano phakathi kwemiphefumlo emibili ukutshintsha indawo. Omnye umphefumlo uphuma emzimbeni womntu kwaye ungena kwakhona kwindawo yokomoya. Umphefumlo wesibini uhamba emzimbeni womzimba kwaye uthatha ubomi obukhoyo phakathi phakathi.
Olu tshintsho lunokuthi lwenzeke ngokukhawuleza, OKANYE ngamanye amaxesha imiphefumlo iya kubelana nomzimba ngexesha elide. Oku kuvumela umphefumlo onqwenela ukuba uhambe uhlale unxibe ixesha elifutshane ukunikela ngomphefumlo omtsha isingeniso okanye iseshoni-ngcaciso malunga nobomi malunga nokuthatha.
Kutheni Umphefumlo Usasazeka?
Ukuhamba-kwimiphefumlo akubi okanye kuthatha umzimba womnye umntu. Ukuhamba-kwenzeka kwenzeka xa imiphefumlo emibini iyavuma ukutshintsha indawo, yenza umgudu womphefumlo. Umphefumlo wokuqala usenza isigqibo sokuba ufuna ukuphuma ebomini kunye nezivumelwano kunye nomnye umphefumlo ukuze uqhubeke nomsondeza ubomi. Ukuhamba-ngaphakathi kuya kuhlala emzimbeni wakhe kwaye uqhubeke uphila nobuntu obuye busekwe.
Izizathu zokuba kutheni umphefumlo unquma ukusuka emzimbeni uze ubuyele emoyeni unokuhluka. Xa umphefumlo udibene okanye ugqithise injongo yakhe yokuzibandakanya emzimbeni, unokukhetha amava amatsha kwenye indawo kwaye ukhetha ukuphuma emzimbeni.
Akuqhelekanga ukuba imiphefumlo "iphinde ixoxisane" nomphefumlo wabo unesivumelwano esinye okanye ngaphezulu kwixesha lokuphila kwaye uqhubeke uhlala emzimbeni. Kodwa, ngezinye iimeko, umphefumlo ufuna ngokupheleleyo kwaye uya kunika umzimba kunye nobuntu obunomnye ukuba ungene kuwo. Ngamanye amaxesha umphefumlo uya kukhetha ukuphuma ngenxa yokuba uvakalelwa umngeni wobunzima kwaye unqwenela ukukhululwa kwizinto ezibonakalayo uze ucamngce ngokukhetha kwawo, uphinde uhlalutye isicwangciso sakhe sokuphila ngexesha uhlala kwindawo yokomoya.
Ngaba Iintlobo Zengxubusho Zomoya Zenzeka Kanjani?
Xa umphefumlo unquma ukushiya ifomu lomzimba omnye umphefumlo ungangena ngaphakathi kwaye uhlale kwindawo yomzimba. Zomibini imiphefumlo kufuneka zivumelane ukuba utshintshwe kwenzeke. Ukutshintshiselana okanye ukudluliselwa kwemiphefumlo kuya kufuthi kwenzeka ngexesha loxinzelelo kubomi bomntu njengengozi yemoto, ukuhlinzwa okukhulu, ukuzama ukuzibulala, isiqhelo sokudakumba okanye ezinye iintlungu. Ngamanye amaxesha umphefumlo uya kuphuma emzimbeni ekupheleni kwamanqanaba obomi avumela omnye umphefumlo ithuba lokuba nama-coma okanye amanye amava ngaphambi kokufa. Oku kunokubangela ezinye izigulane eziphelileyo zingaboni ukuba amalungu omndeni ahleli esilumkileyo kwiibhedi zokufa.
Ukungena kwexesha elifutshane
Ngamanye amaxesha umphefumlo uya "kuqasha" umzimba wayo komnye umphefumlo ixesha elifutshane, uvumele ukuphefumula ebomini babantu. Imiphefumlo emfutshane iya kuhamba-emzimbeni womntu onjengeengcali zokuhlala ekhaya. Ukuhamba kwangaphakathi kwexesha kuza kudlala indlu kunye nosapho lwakho, abahlobo, abamelwane, njl.
Imiphefumlo Yokuhamba Ngemizi
Ngamanye amaxesha umphefumlo uya kuvuma ukuhamba-ngaphakathi kwaye uhlale emzimbeni kunye nomphefumlo woqobo njengabalingani. Oku kufana nokuvula ikhaya lakho kwisityeleli, ube nomntu ohlala naye okanye uqeshe umgcini-ndlu ohlala ngaphakathi.
Ukungena kweendwendwe kuzo kuvuma ukuhlala kunye nomzimba ngezizathu ezahlukeneyo. Ukungena kungena njengomlindi, nje ufuna ukuthunya ubomi bakho. Oku kwenzeka xa umphefumlo wokuqala ucinga ukuphuma ngaphandle komzimba kodwa awuzange wenze isigqibo sakhe sokugqibela. Okanye, uhambo lokungena kweendwendwe luya kufika ukuze luncedise okanye luxhase umphefumlo wasemoyeni ngelixa ephinda ahlawule okanye ajongane nomngeni onzima. Ngamanye amaxesha umphefumlo woqobo uza kuba "ngudliwano-ndlebe" okanye "kumqeqeshi womsebenzi" ukuze afundise ukuhamba-kwithuba elifutshane ngaphambi kokuphuma ngokusisigxina. Iimeko ezininzi ezahlukeneyo zingadlala xa imiphefumlo emibili ikhetha ukuhlala kunye nomzimba / ubuntu.
Ngaba Ucinga Ukuba Unokungena?
Ukuhamba-kwimiphefumlo kudla ngokukhawuleza ukuchonga ngobuntu abayithathayo. Oku kuba kubakho ukungena xa ubuntu bunobungozi ngokomzimba okanye umzimba wonakaliswe ngandlela-thile.
Ukuhamba-kwimiphefumlo kunomthwalo wokufunda indlela yokuhlala phakathi kwemiphefumlo eyabalingani bomphefumlo wobomi bokuqala (abahlobo, amalungu omndeni, abamelwane, abasebenzisana nabo, njl.). Ukuba uvakalelwa ngokwahlukileyo kubomi bakho, okanye unobunzima obunxulumene nabantu ebomini bakho, kwiingcamango, unokuthi ube ngumsebenzi wokuhamba.
Iindlela Zokukhusela Umoya Oxhalabileyo
Isikhokelo sokukholelwa iinkolelo zokuzalwa
Kutheni Izibhunge Zikhangelwe Izibane?
UMartin Luther King, Ukungabikho komthetho, kunye noVeganism
Igalari yeSithombe: 2011 Honda CBR250R
I-Aftermarket Inkqubo yoPhengululo lweTire
'Iipikiniki': Udlalwa nguWilliam Inge